‘सहिद’ कथाको पर्यावरणीय अध्ययन–२ (कथा चर्चा) – Chitwan Post
७.३ सामाजिक पर्यावरण
यस कथामा प्रयोग भएका सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यावरणलाई यसरी विश्लेषण गरिएको छ :
घरमा भगवतीजस्ती स्वास्नी छ हजुर ! छोरो पाएकी । वीरबहादुर त्यस्तो नालायक काम कहिल्यै गर्दैन (पृ. ६४) ।
यस साक्ष्यमा पति र पत्नीलाई एकअर्काको आडभरोसा र सहयोगीका रुपमा ग्रहण गर्ने तथा जस्तोसुकै समस्या भए पनि एकअर्काको विश्वास नतोड्ने हिन्दु संस्कृतिलाई पर्यावरणको रुपमा ल्याइएको छ ।
मजदुरी गर्न गएका व्यक्तिहरु घरपरिवारको सपना बिर्सन्छन्, कमाएको धन सित्तैमा भट्टी पसलमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्, तर आपूm त्यस्तो नभएको सङ्केत वीरबहादुरले दिएको छ । त्यसैले, वीरबहादुर भगवतीजस्ती स्वास्नी र नाबालक छोरोको सपना पूरा गर्ने सन्दर्भ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण आएको हो । यो कथा लेखनको आसपासको समयमा विदेशमा काम गर्न गएका धनेजस्ताले पनि पतिपत्नीको सम्बन्धमा विचलन ल्याउने गरेको सन्दर्भ पर्यावरणका रुपमा आएको छ ।
“के कुरा गर्नुहुन्छ, पोर साल हिन्दु–मुसलमानको दङ्गामा त्यसलाई मैले बचाएको हुँ बाबु ! एउटा मुसलमानले छुरा हानेर त्यसको भुँडी खसाइसकेको थियो, चट्ट म अगाडि गएर छेकेँ र बाँच्यो (पृ. ६६) ।
यस साक्ष्यमा तत्कालीन भारतको धार्मिक साम्प्रदायिक दङ्गा र असहिष्णुतायुक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरणको परिचय दिइएको छ । धने, वीरबहादुरजस्तै विदेशिएको व्यक्ति हो । उसले वीरबहादुरको रूपैयाँ चोरेको छ । सुरूमा वीरबहादुरले उसलाई सहयोग गरेर पुलिस थानाबाट निकालेको पाइन्छ । आज वीरबहादुरकै रूपैयाँ चोरेकाले पुलिसले गिरफ्तार गर्नु वीरबहादुरको लागि ठूलो कुरा रहेको छैन । त्यतिमात्र नभई एक सालअगाडि हिन्दु र मुसलमानको दङ्गामा वीरबहादुरले धनेलाई ज्यानको बाजी राखेर बचाएको हुन्छ । त्यसैले, यस साक्ष्यमा भारतमा विदेशिएका श्रमिकहरुले २००७ सालको आसपासको समयमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दङ्गा र असहिष्णुता बेहोरेको पर्यावरणलाई देखाइएको छ ।
के भन्नु बाबु ! मेरो राम खसेछ । मेरो राजालाई दैवले चुँडेर लग्यो … ! सङ्ख्यामा थोरै भए पनि हामीसँग सत्य र ईश्वरको बल छ … (पृ. ६७ र ७०) ।
माथिका यी दुई साक्ष्यमा दैवीय शक्तिप्रति आस्था रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरणलाई जनाइएको छ । वीरबहादुरले नेपालबाट विदेश पसेकाको उपचार गराउनेदेखि लिएर बेवारिसे मुर्दालाई मृत्यु हुँदा दाहसंस्कार गराउन सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ । घरमा पत्नी र छोराको स्मरण गरिरहने वीरबहादुर छोरोको मृत्यु भएको सुनेपछि घर हिँडेको मानिस बाटामा देउताबाबुसँग भेट हुँदा घर नगएर पनि जनमुक्ति सेनाको कमान्डर भई कोशीको कुशाहाघाटमा सरकारी सेनासँगको भिडन्तमा होमिएको प्रसङ्ग आएको छ । उनले परिवर्तनका लागि हामी थोरै भए पनि सत्यमा अडेका छौँ, ईश्वरले शक्ति प्रदान गर्नेछन् भन्ने देशभक्ति धारणा सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भका रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
बेवारिसे मुर्दालाई कसले पु¥याउँथ्यो बाबु ! डूम–मेहतरले कुकुर–बिरालो फालेझैँ घिच्च्याएर फालिदिन्छन् । मैले भेटेकाजतिलाई घाटमा पु¥याएर जलाइदिने गरेको छु तर के गर्नु बाबु, बोक्ने मानिस र दाउराले मेरो हरसाल सौ–सवासौ रूपियाँजति खर्च हुन्छ । अब के गर्ने त, आफ्ना देशका मानिस हुन्, अर्थोक नभए पनि धर्म त होला (पृ. ६६) ।
यस साक्ष्यमा विदेशिएको वीरबहादुरले आफ्ना साथीभाइलाई उदार मनले विदेशी भूमिमा आफ्नो खल्तीबाट रकम खर्च गरेर भए पनि आफ्नो परम्परामुताबिक दाहसंस्कार गरेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई पर्यावरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विदेशमा सबैजना रूपैयाँ कमाउन गएका हुन्छन् । उनीहरु बेखर्ची भएको समयमा मात्रै नभएर वीरेले मरेपछि पनि आप्mनो देशको संस्कारअनुसार शव घाटमा जलाइदिने गर्दथ्यो । विदेशीले हाम्रो संस्कारअनुकूल चालचलन नगर्ने, विदेशमा लास बोक्ने र दाउराको समस्या पर्ने भए तापनि रोजगारीको निम्ति गएको वीरेले सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेको देखिन्छ । यसमा रूपैयाँ–पैसाभन्दा बढी सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
७.४ आर्थिक पर्यावरण
यस कथामा प्रयोग भएका आर्थिक पर्यावरणलाई यसरी विश्लेषण गरिएको छ :
पैसापैसा मसँग एक कौडी पनि छैन । तपाईं नेपाल फर्कने बेलामा आफ्नो रिक्सामा राखेर स्टेसनसम्म पु¥याइदिऊँला … । दरबानीमा लाउन–खानमात्रै ठीक हुने, पैसा नजोगिने हुनाले आजकल रिक्सा चलाउने काम गरिरहेको छु । साह्रै कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । खाने, सुत्ने फुर्सद रहँदैन । अहिलेसम्म चार सय जम्मा पारिसकेँ, अब दशैँसम्ममा छ–सात सय पु¥याउँछु र दशैँमा घर आउँछु, अनि खेत निखन्नुपर्ला । दशैँमा आउँदा तिमी र रामलाई नयाँनयाँ कपडाहरु लिएर आउनेछु । अब त राम ठूलो भइसक्यो होला । चकचक गरेर तिमीलाई हैरान पार्दो हो … (पृ. ६२) ।
यस साक्ष्यमा तत्कालीन समयका नेपालीहरु कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने तथा विदेशमा पैसा कमाउन ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने आर्थिक पर्यावरणको बोध गराएको छ । नेपालका गाउँमा २००७ सालतिर साहू–महाजनले गरिबहरुको शोषण गरी घरखेत हड्पेको परिवेश यहाँ आएको छ । यसमा पसिना पोखेर मिहिनेत गर्ने वीरबहादुरजस्ता मजदुरहरुलाई मञ्चीय पात्रका रुपमा र शोषणमा परेका गाउँलेहरुलाई नेपथ्य पात्रका रुपमा देखाइएको छ । वीरबहादुर आपूm धन कमाउन विदेशिएको भए पनि समयले गर्दा कमाउन नसकेको बताउँदछ । तर, ऊ वचनको पक्का पात्रको रुपमा उभिएको छ । उसले चिठी लेखाउँदाको पारिश्रमिक दिन नसक्दा नेपाल फर्किने बेलामा रिक्साबाट स्टेसनसम्म लगिदिने सर्त गरेको छ । उसको कडा परिश्रमले केही रूपैयाँ (चार सय) जम्मा पारेको र हिन्दुहरुको महान् चाड दशैँसम्म अलि बढी रूपैयाँ जम्मा गरेर साहूको ऋण तिर्ने इच्छा राखेको छ । उसले चाडबाडमा घरपरिवारका लागि नयाँ कपडासमेत लिएर जाने आशामा कडा मिहिनेत गरेको पर्यावरण उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले, २००७ सालतिर वीरेजस्ता विदेशिएका व्यक्तिहरुले स्वदेशमा रहेका परिवारहरुको सम्झनाबाहेक अरु केही गर्न नसक्ने यथार्थ चित्रण आर्थिक पर्यावरणका रुपमा आएको छ ।
किन एकैपटक लिन्थे ? डिल्लीलाई बिहे गर्दा एक सय लिएको थिएँ । त्यसलाई दोब्य्राई–तेब्य्राई पाँच सय पारेर खेत खाइरहेको छ । … मैले मनमनले भनेँ, “सरकारले गरिब प्रजालाई सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रबन्ध किन गर्दैन ?” (पृ. ६३) ।
यस साक्ष्यमा सामन्त वर्गले गरिबहरुमाथि धेरै व्याज लिएर आर्थिक शोषण गरेको सन्दर्भलाई सङ्केत गरिएको छ । २००७ सालतिरको समयमा सरकारले गरिब जनतालाई सस्तोमा व्याजसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको विषयवस्तु परिवेशमा आएको छ । वीरबहादुरले बिहेका लागि एक सय रूपैयाँ लिएको हो, तर समयमा तिर्न नसकेपछि साहूले उसको खेत बन्धकी खाएको छ । त्यसैले, २००७ सालतिर नेपाली समाजमा जग्गा बन्धक राखी विदेशिनु परेको यथार्थ चित्रण गरिएको छ ।
यो कथावस्तु लेखनको समयमा नेपालमा सामन्ती संस्कारको चरम रुप देखिएको, गरिबले शिर उठाउन नसक्ने गरी व्याज तिर्ने गरेको, साहूको ऋणबाट मुक्ति पाउन वीरबहादुरजस्ता युवाहरु विदेशिन पुगेको र सरकारले गरिब जनताका लागि सस्तोमा ऋण सहुलियत गर्न नसकेको अवस्थालाई आर्थिक पर्यावरणको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यही धने सालेको काम हो । लौ जे किरिया हाल भने पनि सक्छु । सालेले म गरिबको सालभरको पसिना खायो । त्यसलाई परमेश्वरले हातहातै फल दिएनन् भने मलाई भन्नुहोला । … चोरी गरेर के गर्छ नि जान्नुभयो ? रातभर तेह्र नम्बरको कमरामा बसेर जुवा खेल्छ अनि बाँकी पैसा त्यही स्टेसननेरको चिया बेच्ने साहिँली छ नि, हो त्यसलाई दिन्छ र रक्सी धोकेर आधा दिनसम्म सुतिरहन्छ … । तिमीहरु परदेशमा किन रूपियाँपैसा साथमा राख्छौ ? डाँकखानाको सेभिङ ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने गर । त्यसो गरे त चोरिने डर रहँदैन नि (पृ. ६४) ।
यस साक्ष्यमा मजदुरी गरेर जम्मा पारेको दुई–चार पैसा पनि परदेशको ठाउँमा चोरी हुने परिवेश प्रस्तुत गरिएको छ । कथावस्तुमा धनेजस्ताले चोरी गरेको पैसा सही ठाउँमा खर्च गर्न नसकेको, उनीहरुले भट्टी र वेश्यालयमा खर्च गर्ने गरेको यथार्थ चित्रण देखाइएको पाइन्छ । वीरबहादुरको पैसा धनेले चोरेको देखिन्छ । धनेलाई पुलिसले गिरफ्तार गर्दासमेत वीरबहादुरले पुलिस थानामा गएर बचाएको छ । आज सोही सहयोगको फाइदा उठाएर सालभरको कमाइसमेत लुट्दा वीरबहादुरले ऊसँग झगडा गरेको छैन । उसले ईश्वरसँग विश्वास गरी धनले त्यसको परिणाम बेहोर्ने छ भन्दछ । त्यसैले, कथा लेखनको समयमा ईश्वरप्रति आस्थासमेत रहेको आशय पाउन सकिन्छ । त्यस समयमा धनेजस्ताले विदेशी भूमिमा गरेको विकृतिलाई पर्यावरणको रुपमा देखाइएको छ । साथै, भारतका विभिन्न ठाउँमा बैङ्कहरुको स्थापना २००७ सालवरिपरि भइसकेको, तिनीहरुले पैसा जम्मा गर्ने र सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको तर अशिक्षित मजदुरलाई त्यसको बारेमा केही ज्ञानसमेत नभएको पर्यावरणलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
के कमाउनु बाबु, कुनै दिन आठ–दस रूपियाँ पनि होइजान्छ, कुनै दिन जेबबाट रिक्साको किराया तिरेर डेरामा जान्छु … । धनसम्पत्तिको नाउँमा ऊसँग एउटा कब्जा फुक्लेको थोत्रो ट्रङ्क र एउटा सानो कम्बलको सानु गुन्टासिवाय केही थिएन (पृ. ६७–६८) ।
यस साक्ष्यमा नेपालमा साहूको दमन र शोषण सहन नसकेर आफ्नो आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने सपना बोकेर विदेशी भूमिमा दिनरात परिश्रम गर्ने मजदुरको चित्रण गरिएको छ । वीरबहादुरले विदेशमा साहूको रिक्सा चलाएर ऋण तिर्ने अठोट गरेको छ । उसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सकेसम्मको सहयोग गर्दछ । उसले कडा दुःख गरे पनि सबै दिन रिक्साबाट कमाइ भएको पाइँदैन । त्यसैले, विदेशिएका नेपालीहरु पनि कुनै न कुनैरुपले शोषित हुनुपरेको यथार्थ देखाइएको छ । वीरेले विदेशी भूमिमा धेरै कडा परिश्रम गर्दा पनि कब्जा फुक्लेको ट्याङ्क र एउटा सानो कम्मलको गुण्टासिवाय केही नभएको चित्रण छ । त्यसैले, नेपालीहरु २००७ सालको आसपासको समयमा देशको कारणले वीरेजस्ता व्यक्तिहरु विदेशिए पनि धन कमाउन नसकेको सामाजिक जीवनको यथार्थ चित्रण गरिएको छ ।
७.५ राजनीतिक पर्यावरण
यस कथामा प्रयोग भएका आर्थिक पर्यावरणलाई यसरी विश्लेषण गरिएको छ ः
नेपालमा भित्रभित्रै सल्किरहेको क्रान्तिको आगो एकैपटक दन्कियो । आफ्ना प्यारा प्रजालाई आजाद गराउनका निमित्त हाम्रा वीर सम्राट् त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव २००७ साल कात्र्तिक २१ गते आफ्ना सारा परिवार लिई शरणार्थीका रुपमा नेपालको भारतीय दूतावासमा प्रवेश गर्नुभो र कार्तिक १६ गते हिन्दु सरकारको संरक्षणमा विमानद्वारा दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुभो । … काङ्ग्रेसले नौतनवा, गोरखपुर, पटना, लखनौ, कटिहार इत्यादि ठाउँठाउँमा जनमुक्ति सेनाको भर्ती सुरू ग¥यो । भारतका स्कुल–कलेजहरुमा पढ्ने धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरुले पनि क्रान्तिमा सक्रिय भाग लिए । हामी ठाउँठाउँमा मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरु पनि रेडक्रसमा काम गर्नका निमित्त … । म विराटनगरको सैनिक अस्पतालमा खटिएँ (पृ. ६८) ।
यस साक्ष्यमा नेपालको ग्रामीण इलाकादेखि भारतको गोरखपुर, पटना, लखनउजस्ता सहरहरुको चित्रण गरिएको छ । नेपालको जनक्रान्तिको समयमा राजा त्रिभुवन नयाँदिल्ली गएको प्रसङ्ग उल्लेख छ । यस प्रसङ्गले राणाकालीन सामन्ती सरकारबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन नेपालको पूर्वी मानेभञ्ज्याङदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका स्थानबाट क्रान्ति सुरू भएको, भारतमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरु क्रान्तिमा भाग लिन विराटनगर आएका र सोही समयमा राजनीतिक संस्थाले क्रान्तिको अगुवाइ गरेर क्रान्ति सफल भएको राजनीतिक पर्यावरण देखाइएको छ ।
हामीले आजादीका लागि नेपालका सामन्त सरकारसँग लडाइँ सुरू ग¥यौँ । मुक्तिसेनाका निमित्त स्वयंसेवकहरुको बहुतै जरूरत छ । तिमीजस्तो बहादुर कमान्डर पाए एउटा … हाम्रो अवश्य विजय हुनेछ । तिमी घर जान पाउँदैनौ । सेनामा भर्ती हुनुपर्छ (पृ. ६८) ।
यस साक्ष्यमा नेपालको सामन्ती सरकारको विरूद्धमा चालिएको आन्दोलनका प्रसङ्गहरु आएको छ । २००७ सालमा वीरबहादुरजस्ता नेपालीहरुले स्वयंसेवकका रुपमा राजनीतिक मोर्चा सम्हालेको अवस्था देखाइएको छ । वीरबहादुरले छोराको मृत्युको खबर पाएपछि चिन्तित भई नेपाल फर्कन लागेको देखिन्छ । उसले प्लेटफर्ममा धेरै वर्षपछि देउताबाबुलाई भेट्दछ । देउताबाबुले आमाको पुकारभन्दा स्वास्नी र छोराछोरीको पुकार ठूलो हुँदैन भन्ने तर्क राख्दछ । वीरबहादुरले उक्त तर्क आत्मसात् गर्दछ र ऊ प्लाटुन कमान्डरमा भर्ती भई सामन्ती सरकारको विरूद्धमा होमिएको पाइन्छ । त्यसैले, २००७ सालको क्रान्ति सफल पार्न वीरबहादुरजस्ता व्यक्तिले पनि भूमिका खेलेको पर्यावरण उल्लेख गरिएको छ ।
वीरबहादुर ! तिमीजस्ता बहादुर योद्धालाई यो खबर सुनेर खुसी नै लाग्ला, तिम्रा देवताबाबु पनि अस्तिको लडाइँमा ‘सहिद’ हुनुभयो । … ओहो ! मृत्युको रुप पनि कति प्रकारको हुन्छ, ऊ देशको निमित्त वीरगतिले मर्न लाग्यो, अरु हजारौँ नेपालीहरु ठाउँठाउँमा कुकुर–बिराला मरेजस्तो मरिरहेका छन् । अब डल्लीलाई चिठी पो के भनेर लेखिदिँऊ ? छोरा मरेको वर्ष दिन भएको छैन, लोग्ने परदेशमा यसरी मर्न लागिरहेको छ । जग्गाजमिन साहूले अँठ्याइराखेको छ । चिठी पाउँदा ती दिनहीन विधवाको हृदय कस्तो होला ! लोग्नेको क्रियाकाष्टा गर्ने पैसा पनि पो छ कि छैन ? अब सायद उनीसँग बन्धक राख्ने गहना पनि केही होवैन ! … (पृ. ७०–७१) ।
यस साक्ष्यमा राणाशासक वा सामन्ती सरकारबाट नेपाल र नेपालीलाई मुक्त गराउने क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूभागमा शहादत प्राप्त युवाहरुको प्रसङ्ग आएको छ । २००७ सालमा सामन्ती सरकारको विरूद्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आन्दोलन चर्किएको पाइन्छ । नेपाल छोडेर विदेशी भूमिमा मजदुरी गर्न गएका सबैलाई जनक्रान्तिले प्रभाव पार्दछ । फलस्वरुप देउताबाबु र वीरबहादुर पनि त्यसको अछूतो रहँदैनन् । उनीहरु सामन्ती सरकारको विरूद्धमा सहभागी हुन्छन्, समयसँगै वीरबहादुर घाइते हुँदा देउताबाबुको मृत्यु भइसकेको खबर वीरेले पाउँछ । सामन्ती सरकारले आपूm टिक्न निहत्था जनतालाई कुकुर र बिरालोजस्तै मार्दछन् । जसको फलस्वरुप वीरबहादुरले आपूm नबाँच्ने सङ्केत पाए पनि विधवा हुन लागेकी श्रीमतीलाई घरको व्यावहारिक विषयमा केही लेख्न सक्दैन । त्यसैले, २००७ सालको जनक्रान्तिमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिई राष्ट्रिय स्वार्थमा समर्पित भएका पात्रहरुको पर्यावरणलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तुत ‘सहिद’ कथामा विसं २००७ पूर्व प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालीहरुले गरेको सङ्घर्षपूर्ण योगदानलाई चित्रण गरिएको छ । यो सामाजिक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथा हो । कथामा भएका सम्पूर्ण घटना परिघटनाहरु समाजकै सेरोफेरोमा घटित भएका छन् । यिनीहरुको सरोकार समाजमा बस्ने मानवीय क्रियाकलापसँग जोडिएको छ । कथामा भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पर्यावरणको प्रस्तुति सशक्त भएर आएको छ । यस कथाले सामन्ती वर्गबाट भएको शोषण, अन्याय र अत्याचारलाई शाश्वत रुप दिएको छ ।
कथामा भौगोलिक पर्यावरणका रुपमा नेपालका पोखरा, नुवाकोट, रामेछाप, मानेभञ्ज्याङ, महाकाली, विराटनगर, कोसी नदीको कुशाहघाटलगायत भारतका नौतनवा, गोरखपुर, लखनौ, पटना, कटिहारजस्ता स्थानको वर्णन गरिएको छ । गाउँ र सहरका परिदृश्यहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा कथामा आएका छन् । साहूले खेतबारी खाइदिनु, सरकारले जफत गर्नु, आफ्नो जग्गाजमिनको आयले खान नपुग्नुजस्ता परिवेशहरु ग्रामीण क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेका छन् । त्यस्तै, सहरिया परिदृश्यका रुपमा कथामा स्टेसन, बिल्डिङ, अस्पताल, ट्रेन, रिक्सा, डेरा, घण्टाघर, मारवाडी, गाडी, प्लेटफार्म तथा थानाहरु आएका छन् । त्यस्तै, आकास बादलले ढाक्नु, समय–समयमा चिसो बतास चल्नु, पुसको जाडो बढ्दै जानु, स्टेसननिरको रुखमुनि भेट हुनुजस्ता दृश्यको वर्णन प्राकृतिक पर्यावरणका रुपमा आएका छन् ।
वीरबहादुरले एउटा सादा लिफाफा र कागज हातमा लिएर म पात्रलाई चिठी लेखिदिन आग्रह गर्नु, प्राविधिक शिक्षाका लागि भारत उत्तम स्थल देखिनु, शिक्षित व्यक्तिमा दयामाया नदेखिनु, सामान्य मजदुरीका लागि पनि अर्काको देशमा धाउनु, कमाएको पैसा चोरी हुनुजस्ता दृश्यले नेपालको दयनीय शैक्षिक पर्यावरणलाई समेटेको छ ।
कथाका पात्रहरुले दैविक शक्तिमा विश्वास गर्नु, विभिन्न जात, जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय, भाषाभाषीहरुका बीचमा विभेद तथा मनमुटाव हुनु, आफूलाई जस्तोसुकै समस्या परे तापनि अरुलाई सहयोग गर्नु, अर्थोक नभए पनि धर्म त होला भन्ने मनस्थितिमा पुग्नु, सामाजिक विकृति र विसङ्गति दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु, जुवातास खेल्नु, वेश्यागमन गर्नु, घरपरिवारको सपना बिर्सनु, नेपालीहरुले जतिसुकै अभावमा पनि आफ्नो जातिलाई माया, प्रेम र सद्भाव राखी सहयोग गर्नु, आफ्नै परम्परा र संस्कारअनुसार दाहसंस्कार गर्नुजस्ता क्रियाकलाप सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशका रुपमा आएका छन् ।
बिहेमा वीरबहादुरले लिएको एक सय रूपैयाँ तिर्न नसकी विदेशिनु, घरखेत र जग्गाजमिन साहूले जफत गर्नु, साहूको ऋणबाट मुक्ति पाउन नसक्नु, परदेशमा पुगेर पनि कुल्ली, पाले तथा रिक्सा चालकजस्ता कामहरु गर्न बाध्य हुनु, दिनरात कडा परिश्रम गर्दा धन कमाउन नसक्नु, पैसाकै अभावकै कारणले अर्काको चोरी गर्नुजस्ता पक्षहरु आर्थिक पर्यावरणका रुपमा आएका छन् ।
२००७ साल पूर्वको तत्कालीन नेपाली समाजले राणाशासनको विरूद्धमा मुक्तिसङ्घर्षका लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएको सन्दर्भ कथामा आएको छ । नेपालमा क्रान्तिको आगो भित्रभित्रै सल्किनु, राजा त्रिभुवन नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नु, देशविदेशका नेपालीहरु प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि प्रतिबद्ध भएर लड्नु, वीरबहादुरजस्ताले राजनीतिक मोर्चा सम्हाल्नुजस्ता कारणहरु राजनीतिक परिवेशका रुपमा आएका छन् । त्यसैले, गुरूप्रसाद मैनालीको ‘सहिद’ कथामा पर्यावरणीय समायोजन भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरुपले सफल भएको पाइन्छ । (समाप्त)
(प्राध्यापक वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपाली विभाग)